7 ၏စျေးကွက်အတွက် 2018 အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး) | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/7 ၏စျေးကွက်အတွက် 2018 အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
အပေါ် Posted 08 / 31 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
5 ။ Phenylpiracetam
7 ။ Bromantane
Nootropics ဆီလီကွန်ဗယ်လီအနေဖြင့်အသစ်သောစမတ်-မူးယစ်ဆေးဝါး၏အမည်ဖြစ်၏။ သူတို့ကပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုကတိပေးနှင့်လက်ရှိတွင်အမေရိကန်အနောက်ကမ်းခြေကနေလျှင်မြန်စွာပြန့်ပွားနေကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကသစ်ကိုအစွန်းရောက်များ၏အန္တရာယ်ကိုဆန့်ကျင်သတိပေးကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ Noootropics, အသိဉာဏ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, မှတ်ဉာဏ်စိတ်ကြွဆေးနှင့်သိမြင်မှု enhancers, ထိုကဲ့သို့သောသိမှတ်ခံစားမှု, မှတ်ဉာဏ်, ထောက်လှမ်းရေး, တီထွင်ဖန်တီးမှု, လှုံ့ဆျောမှု, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအဖြစ်အချို့သောလူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ (ဦးနှောက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စွမ်းရည်များ) ခြီးမွှောကြောင်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်ကြသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင် nootropics ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာဦးနှောက် (neurotransmitters, အင်ဇိုင်းတွေနှင့်ဟော်မုန်း) တွင် neurochemical ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏ရရှိမှုပြောင်းလဲကြောင့် nootropics အလုပ်ယုံကြည်သည်, ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်တိုးတက်အောင်သို့မဟုတ်သက်ဝင်အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်အာရုံခံတိုးတက်မှုနှုန်း (neurogenesis) ကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစကားလုံး "nootropic" ဟုရိုမေးနီးယားသမားကျောနလေိအီး Giurgea (1972-1923) က 1995 အတွက်စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ Giurgea ပစ္စည်းဥစ္စာများပေါင်းစပ်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည် piracetam ယခုလူသိအများဆုံး nootropics တဦးဖြစ်သည့် 1964 အတွက်။ သူဝေါဟာရကိုစိတ်မှ lexical တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်အတွက်အသုံးအနှုန်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Giurgea UCB မှာ Neuropharmacology ဌာနမှူးဖြစ်လာခဲ့တယ် 1963 အတွက်ဘူခါရက်ထဲမှာဆေးပညာ၏ဌာနမှာဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် Neurophysiology ပါမောက္ခအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Giurgea အဆိုအရ nootropics အမည်ရ, piracetam ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝိသေသလက္ခဏာများကိုမျှဝေကြောင်းမူးယစ်ဆေးနေသောခေါင်းစဉ်:
1 ။ စိတ်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာချက်ချင်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖျောပွသောဦးနှောက်၏သမာဓိလှုပ်ရှားမှုများ၏တစ်ဦးကတိုက်ရိုက်ဖွင့်သုံး။
2 ။ ဤသည်ကို Activation ရွေးချယ်သည်အခြားဦးနှောက်အဆင့်ဆင့်အတွက် telencephalon နှင့်မထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်စေသင့်ပါတယ်။
3 ။ ပိုမိုမြင့်မားသောဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပြဿနာများအပေါ်တစ်ဦးပွနျလညျထူထောငျအကျိုးသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမှသကဲ့သို့။
Giurgea ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်မဆို nootropic ပစ္စည်းဥစ္စာအမှန်တကယ်သိမှတ်ခံစားမှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းတစ်ဦးအာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးအဆိပ်အတောက်အခမဲ့လျှင်တစ်ဦးအပြုသဘောသိမြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကပစ္စည်းဥစ္စာအဓိပ္ပါယ်များ၏သဘောတစ်ခုသာ nootropic ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အဆိပ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါအဖြစ်သူတို့က, သိမြင်မှုတိုးမြှင့်စေနိုင်ပါတယ်သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးအဖြစ်ဦးနှောက်စိတ်ကြွဆေး, အတင်းကြပ်သဘောအရ nootropic အေးဂျင့်များမရှိကြပေ။
nootropics ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်လေ့လာရေးအမျိုးမျိုးသော pharmacological သက်ရောက်မှုထင်ရှားပြီ ဒါပေမယ့်တစ်ခုလုံးကိုမူးယစ်ဆေးလူတန်းစားမျှဝေကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများတစ်ခုတည်းကြီးစိုး type ကိုပြံ့နှံ့မဟုတ်ပါဘူး။ လူအားလုံးတို့သည်အချက်အလက်များအတွက် cholinergic function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုး: အ choline လွှာမှ muscarinic နှင့်နီကိုတင်း receptors အပေါ်ပြုမူရသော acetylcholine ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်, တိုးပွါးတိုးများလာခြင်း။ Piracetam လည်း 30% -40% အားဖြင့်တိုကျရိုကျ cortex ၏ acetylcholine receptors တွေရဲ့သိပ်သည်းဆတိုးပွားစေပါသည်။
adenosine triphosphate (ATP) ၏ပုံစံအတွက်စွမ်းအင်ဖြန့်ဝေဦးနှောက်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဖို့အရေးကြီးသည်။ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေဂလူးကို့စနှင့်အောက်ဆီဂျင်ကနေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ATP ရဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်အခြားဆဲလ်ကနေ ATP ကိုစုပ်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Piracetam ATP နှင့် adenosine monophosphate (amp) သို့ adenosine diphosphate (လူတွေလည်းရှိနေတယ်) ပြောင်းပေးသော adenylate kinase အင်ဇိုင်း၏လှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဤသည် hypoxia အတွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ ATP အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်တစ်စက်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်လည်းကြောင့် oxidative glycolysis ၏တိုးမြှင့်ရန်, hypoxia ကနေပြန်လည်နာလန်ထူ accelerates ။
လုပ်ဆောင်ချက်နောက်ထပ်ယန္တရား platelet စုစည်းမှုနှင့်အမြှေးပါးသို့ယူဆရ phospholipids ၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်ဆယ်လူလာအမြှေးပါးလျော့ပြေအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်တစ်လျှော့ချရေးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ nootropics ပါဝင်:
•အလွန်အကျွံ arousal သို့မဟုတ်ကွော
အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူတ္ထုများဟာ nootropics ဖို့တာဝန်ရှိပါသည်:
•အ cerebrum အတွက် Effect, ဦးနှောက်၏အခြားဒေသများထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
•အနှောက် cortex ၏ထိန်းချုပ်မှုယန္တရား၏ထိရောက်မှုကိုတိုးပှား
• psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုကိုလှမျးမိုးမနေပါနဲ့
မကြာသေးမီနှစ်များတွင် nootropics များအတွက်စျေးကွက်ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ အတော်များများကတ္ထုများသာယာယီခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါ်ရေရှည်လေ့လာမှုများပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အခြားတ္ထုများအကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဂုဏ်ထူးရှိပါသည်။ ကအာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး Non-အဆိပ်သင့်လျှင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အသုံးပြုပုံအပြုသဘောဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေသောမည်သည့်ပစ္စည်းဥစ္စာတစ် nootropic အေးဂျင့်သည်။ ဒါဟာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဤသဘောဖွငျ့, ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးအဖြစ်တ္ထုများဟာ nootropics အကြားမရှိကြပေ။
nootropics တစ်ဘုံအင်္ဂါရပ်ကိုသူတို့ရှိသမျှသည်ထောက်ခံမှုနှင့်ဦးနှောက်အတွက် neurotransmitters နှင့်၎င်းတို့၏ပတ်လမ်းမြှင့်တင်ရန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ "ဦးနှောက်စွမ်းအင်" ဟုအဆိုပါ adenosine triphosphate (abk ။ ATP) ဖြစ်ပါသည်, သကြားနဲ့အောက်စီဂျင်ကနေဦးနှောက်ဆဲလ်တွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာ။ ဥပမာအားဖြင့်, piracetam အောက်စီဂျင်မရှိခြင်း၏အခွအေနေအောက်မှာ ATP ထုတ်လုပ်ရိုးရှင်းစွာနဲ့မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစဦးနှောက်, အောက်ဆီဂျင်စားသုံးမှုနှင့်သကြားဇီဝြဖစ်ဖို့သွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွားစေပါသည်။
အဆိုပါ7အကောင်းဆုံး Nootropics2018 ၏ဈေးကွက်ထဲမှာ (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
based စိတ်ကြွဆေး - Armodafinil အဆိုပါစိတ်ကြွဆေးထံမှ၎င်း၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာသိသိသာသာကွာခြားသည့် psychostimulants ၏အုပ်စုအနေဖြင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ racemate modafinil ၏ (R) -enantiomer ကိုယ်စားပြုတယ်။
တစ်နေ့တာအတွင်းအလွန်အကျွံအိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူ narcolepsy, စိတ်ကျရောဂါ, idiopathic အိပ်သို့မဟုတ် narcolepsy အဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
1 ။ ဒီထုတ်ကုန်မှမတည့်ဘို့မသန်စွမ်း။
2 ။ လက်ဝဲ ventricular hypertrophy, ischemic electrocardiographic အပြောင်းအလဲများ, ရင်ဘတ်နာကျင်မှု, ပုံမမှန်ခြင်းသို့မဟုတ် mitral valve prolapse နှင့်မကြာသေးမီက myocardial infarction ၏လက်တွေ့သရုပ်, မတည်မငြိမ် angina လူနာမသန်စွမ်း။
1 ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအကောင်းဆုံးထိုး (နေ့စဉ် 50 ~ 100mg) သည်တိုင်အောင်, တိုင်း 50 ~4ရက်ပေါင်းသေးငယ်တဲ့ဆေးထိုး (နေ့စဉ်5~ 200mg), 400mg ကနေစတင်ရပါမည်။
2 ။ ပြင်းထန်အသည်းပျက်စီးမှုနှင့်အတူလူနာဆေးထိုးသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာရှက်, ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာမလုံလောက်ခြင်းနှင့်သောက်သုံးသောလျှော့ချထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
3 ။ အလွန်အကျွံအစာခြေစနစ်ကပျို့, ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး, နှလုံးသွေးကြောစနစ်က tachycardia, bradycardia, သွေးတိုး, ရင်ဘတ်နာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောနာမငြိမ်, ရှုပျထှေး, ရှုပ်ထွေးမှုများ, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းအဖြစ်အိပ်မပျော်, ဗဟိုအာရုံကြောရောဂါလက္ခဏာတွေ, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ဖယျရှားဖို့ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ထောက်ခံသင့်ပါတယ်။
4 ။ ဒီထုတ်ကုန်သုံးနေစဉ်အရက်အဖျော်ယမကာတာကိုရှောင်ပါ။
5 ။ စိတ်ရောဂါတစ်ခုသမိုင်းနှင့်အတူသူများသည်သတိနဲ့အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
6 ။ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာအဆိပ်အတောက်ကို C အဖြစ်ခွဲခြားသည်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသုံးစွဲမှုအကောင်းအဆိုး cons ချိန်သင့်တယ်။
7 ။ အသက် 16 နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ဆေးဝါးများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
1 ။ တကိုယ်လုံးခေါင်းကိုက်ခြင်း, နောက်ကျောနာကျင်မှု, တုပ်ကွေးကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ, ရင်ဘတ်နာကျင်မှု, ချမ်းတုန်ခြင်း, လည်ပင်းတောင့်တင်း။
2 ။ နှလုံးသွေးကြောသွေးတိုးရောဂါ, tachycardia, ရင်တုန်, vasodilation ။
3 ။ အစာခြေစနစ်ကပျို့, ဝမ်းလျှော, ရင်ခြောက်သွေ့ပါးစပ်, အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံး, ချုပ်, ပုံမှန်မဟုတ်သောအသည်း function ကို, လေ, ပါးစပ်အနာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, ခြောက်သွေ့တဲ့ပါးစပ်, ရေငတ်။
4 ။ Hemolymphatic system ကို eosinophilia ။
5 ။ ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖော။
6 ။ ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ကွောကျ, အိပ်မပျော်, စိုးရိမ်စိတ်, မူးဝြေခင်း, စိတ်ကျရောဂါ, paresthesia, lethargy, hypertonia, dyskinesia, hyperactivity, လှုံ့ဆော်မှု, ရှုပ်ထွေးမှုများ, တုန်တုန်ယင်ယင်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှု, မူးဝြေခင်း။
7 ။ အသက်ရှူမှုစနစ်တစ်ခုလုံးကို rhinitis, pharyngitis, အဆုတ်ရောဂါ, epistaxis, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ။
8 ။ အရေပြားချွေး, ရေယုန် simplex ။
9 ။ တိကျတဲ့ခံစားမှု amblyopia, အမြင်အာရုံမူမမှန်, ပြောင်းပြန်အရသာ, မျက်စိနာကျင်ကိုက်ခဲ။
10 ။ Urogenital စနစ်ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆီးသွားခြင်း, hematuria, pyuria ။
နံနက်ယံ၌ယူခံတွင်း, 200 ~ 400mg နေ့စဉ်။ ပြင်းထန်အသည်း function ကို၏ဆေးထိုးပုံမှန်ထိုး၏ 1 /2လျှော့ချရပါမည်။
1 ။ အဆိုပါထိုကဲ့သို့သော carbamazepine, itraconazole, ketoconazole သို့မဟုတ် phenobarbital အဖြစ် CYP3A4 ၏ inhibitor, rifampicin CYP3A4 သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် modafinil ဒီထုတ်ကုန်၏အသွေးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
2 ။ ဒီထုတ်ကုန် 3% အားဖြင့် cyclosporine ၏အသွေးအာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်လည်း theophylline ၏သွေးရည်ကြည်အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းစေတဲ့ CYP4A50 သွေးဆောင်သည်။
3 ။ ဒီထုတ်ကုန် warfarin, diazepam နှင့် phenytoin ၏အသွေးအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွါးသော Reversible လုပ် CYP2C19 inhibitor ဖြစ်ပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်လည်းသုံးဘီးဆိုင်ကယ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants, chlorpromazine နှင့် omeprazole တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော lansoprazole နှင့် propranolol အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးအသှေးကိုအာရုံစူးစိုက်မှု။ အထက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းလျှောက်ထားသည့်အခါဆေးထိုးအညီချိန်ညှိထားရမည်နှင့်အသွေးကိုအာရုံစူးစိုက်မှုစောင့်ကြည့်ရပါမည်။
4 ။ ဒီထုတ်ကုန်တီးရွိုက် contraceptives ၏ curative အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အခြားအတားဆေးအစီအမံဒီထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းစဉ်အတွင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးရပ်တန့်ပြီးနောက်တစ်လအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်
Modafinil ထိုကဲ့သို့သော narcolepsy, ပြောင်းကုန်ပြီအလုပ်အိပ်ပျော်ခြင်းနှောင့်အယှက်များနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်နှင့်ဆက်စပ်နေ့ခင်းဘက်အလွန်အကျွံအိပ်အဖြစ်မမှန်ဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုထားတဲ့နိုးထ accelerator တစ်ခုပါပဲ။ Modafinil လည်းကျယ်ပြန့်နေတဲ့မှတ်ဥာဏ် Enhancer အဖြစ်လက္ခဏာများပြင်ပအသုံးပြုသည်။
1 ။ narcolepsy ၏ကုသမှု: narcolepsy သူ၏အကြောင်းရင်းမသိရသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေကတစ်နေ့တာအတွင်းနိုးသို့မဟုတ်သတိပေးချက်မနေနိုငျသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကိုလညျးမတားဆီးအိပ်ပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်ခရီးစဉ်ရှိပါသည်။ လူနာများမကြာခဏ Self-လုပ်ရောဂါများပါစေလို့မရပါဘူး။ Sleeping နှင့်သာမန်အားဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ခြင်း။ နိုးထမူးယစ်ဆေးဝါး၏အသစ်တစ်ခုမျိုးအဖြစ်, Modafinil လူနာတစ်နေ့တာအတွင်းထိနမိဒ္ဓကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရစေခြင်းနှင့်ပုံမှန်အလုပ်ထိန်းသိမ်းရန်, ဒါပေမယ့်ဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်မျှဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုရှိလိမ့်မည်နိုင်ပါ။ အိပ်စက်ခြင်းမမှန်များအတွက်အများဆုံးစံပြမူးယစ်ဆေး။ လေ့လာရေး modafinil ထိရောက်စွာရောဂါလက္ခဏာပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်သိသိသာသာညမှာအိပ်စက်ခြင်း၏အချိန်နှင့်အရည်အသွေးထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲတစ်နေ့တာအတွင်းအိပ်ပျော်ခြင်း၏ပမာဏနှင့်ကာလ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ခံတွင်း modafinil 18-24 မီလီဂရမ် / နေ့၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးမှာ narcolepsy နှင့်အတူအလိုအလျောက် narcolepsy နှင့် 200 လူနာနှင့်အတူ 500 လူနာမှအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အလိုအလျောက် narcolepsy နှင့် narcolepsy နှင့်အတူလူနာအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြသခဲ့သည်။ အိပ်စက်ခြင်းသိသိသာသာအသီးသီး, တစ်ဦးစုစုပေါင်းထိရောက်သော 83% နှုန်းနှင့် 71% နှင့်အတူလျှော့ချခဲ့သည်။ Modafinil ကိုလည်းအိပ်ရေးပျက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ရောဂါ dyskinesia တားဆီးသိမြင် function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နှင့်ညအချိန်အိပ်ပျော်ရာအစအဦး, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, နိုးထနှင့်အိပ်စက်ခြင်းဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, မကနံနက်၏အပြုအမူနှင့်နေ့ခင်းဘက်လိပ်ကိုထိခိုက်ပါဘူးနိုင်ပါတယ်။
2 ။ အရက်အော်ဂဲနစ် encephalopathy syndrome ရောဂါကုသ: Modafinil လည်းအရက်အော်ဂဲနစ် encephalopathy syndrome ရောဂါကုသရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တချို့လူတွေကအရက်အော်ဂဲနစ် encephalopathy syndrome ရောဂါကုသရန် modafinil သုံးခြင်းနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာစမ်းသပ်မှုများနှင့် neurophysiological လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ် modafinil နေ့စဉ်မူးယစ်ဆေးယူပြီးပြီးနောက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးတက်နှင့်လက်တွေ့ကုသမှုထိရောက်နှုန်းသည် 85% ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီထုတ်ကုန်များ၏ထိရောက်သောထိုး 200 ~ 400 နံနက်ယံ၌နှင့်အလယ်တန်းအတွက်နှစ်ကြိမ်ယူတစ်နေ့လျှင် mg ဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ Enhance Anti-စိတ်ကျရောဂါမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု: ကြောင့် modafinil ၏အနိမ့်စွဲလမ်းသဘောသဘာဝအခြားစိတ်ကြွဆေးများအတွက်အစားထိုးအဖြစ်အလားအလာစေသည်, တစ်ဦးအလားအလာ Anti-စိတ်ကျရောဂါမူးယစ်ဆေး Enhancer ဖြစ်ပါတယ်။
4 ။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါကုသမှုများအတွက်: လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား modafinil အာရုံကိုလိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ (ADHD) နဲ့ကလေးတွေတိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုအကြံပြုထားသည်။
Noopept တစ်ဦး nootropic peptide ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့, စုစည်းပြီးနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း: လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိသမျှသောအဆင့်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးနေချိန်မှာ Noopept, သင်ယူဖို့နိုင်စွမ်းကိုတိုးပွားစေမှတ်ဥာဏ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကြောင့်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်, အိပ်စက်ခြင်း၏ဝိရောဓိအဆင့်အဖြစ် glutamatergic နှင့်ဗဟို cholinergic အဲဒီ receptor အဆောက်အဦများ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိခြင်းမှသွေးအားနည်းရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်။
မူးယစ်ဆေး Noopept ၏အာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်မှု, အဆိပ်အတောက်များနှင့်စိတ်ထိခိုက်တွေ့ရှိရပါသည် hypoxia မှတစ်ရှူးများ၏ခုခံတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ လေဖြတ်ခြင်း၏ thrombotic မော်ဒယ်တွင်, Noopept သည့်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျော့နည်းစေနှင့်အချိုမှုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အစွန်းရောက်အောက်ဆီဂျင် neurotoxic ဆေးများနှင့်ထိတွေ့နေကြရသော cerebellum နှင့်ဦးနှောက် cortex ၏ဆဲလ်အသေခံကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, noopept, ပိုလျှံကယ်လစီယမ်၏ပြင်းထန်မှုလျော့နည်းစေ (ကြောင့် fibrinolytic, anticoagulant နှင့် antiaggregatory အရေးယူမှုမှ) ထိုအသွေး၏ rheological ဂုဏ်သတ္တိများ၏ပုံမှန်အားပေးအားမြှောက်။
J147 CAS 1146963-51-0 တစ်ခုစမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးဝါးအယ်လ်ဇိုင်းမား၏ကုသမှုနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်အတွက်အသုံးပြုသည်ဖြစ်ပါတယ်။ J147 လို့ခေါ်တဲ့စမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးခေတ်မီ elixir ဖြစ်နိုင်သည်။ လေ့လာရေးကထိရောက်စွာအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါလိုဆကျဆံနှင့်ကြွက်များ၏အိုမင်း reverse နိုင်သည်ကိုပြသခဲ့ကြသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များလည်းလူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီကနိုင်ငံတကာမဂ္ဂဇင်းအိုမင်းခြင်းဟာဆဲလ်အတွင်းထုတ်ဝေနေတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာထဲမှာ, Salk Institute မှသုတေသီတွေက J147 အလုပ်လုပ်တယ်သောမော်လီကျူးယန္တရားပြသလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ J147 mitochondria ထဲမှာပရိုတိန်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အငယ်ကိုကြည့်ရှုကြောင်းအိုမင်းဆဲလ်တွေ, ကြွက်, နှင့်သစ်သီးယင်ကောင်မြှင့်တင်ရန်ပေါင်းစပ်။
သုတေသီ Dave Schubert ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကစမ်းသပ်ဆဲမူးယစ်ဆေး J147 နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိုမင်း, အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအကြား link တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကလည်း, J147 ပစ်မှတ်များအတွက်ရှာဖွေရေးအိုမင်း၏လက်တွေ့ကုသမှုများအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်နိုင်သည်။ အဖြစ်အစောပိုင်း 2011 အဖြစ်ကျနော်တို့ J147 သည့်ဟင်းအမွှေးအကြိုင်နနွင်းတစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းမူးယစ်ဆေးတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ J147 ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကတည်းကသုတေသီများကထိထိရောက်ရောက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ memory ချို့ယွင်းချက် reverse နှင့်အလားအလာသစ်ကိုဦးနှောက်ဆဲလ်တွေမြှင့်တင်နိုင်သောတွေ့ပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကနှေးကွေးသို့မဟုတ် reverse ဟာအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ mouse ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ, ဒါပေမယ့်သုတေသီများ J147 မော်လီကျူးအဆင့်မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်နိုင်ပါ။
အတော်များများကလေ့လာမှုများပြီးသားအယ်လ်ဇိုင်းမားကုထုံးအပေါ် huperzine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကြည့်ရှုကြသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပါဝင်သူများကသာသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကပစ္စုပ္ပန်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ်မေးခွန်းထုတ်စရာစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများအသုံးပြုခဲ့သည်အဖြစ်ကံမကောင်းစွာဤစမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုအလွန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောမရှိကြပေ။
အတော်ကြာသုတေသနစာတမ်းများတစ် Meta-analysis သည်များတွင်တိုးတက်မှုများကအောက်ပါနယ်ပယ်များတွင် (အယ်လ်ဇိုင်းမားလူနာအတွက်) ကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ: သိမြင်ကျွမ်းကျင်မှု, ယေဘုယျအခြေအနေနှင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ။ ကံမကောင်းစွာပဲ pramiracetam အပေါ်နည်းနည်းသုတေသနယေဘုယျအားဖြင့်လည်းမရှိပေမယ့်နောက်ဆုံး 10 နှစ်များတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မဟုတ်တစ်ခုတည်းလေ့လာမှုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Phenylpiracetam အပြုသဘောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပြီးပျော့လှုံ့ဆော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော nootropic အေးဂျင့်သည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုကြောင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်း phenyl အုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်သော piracetam တစ်ပြုပြင်မွမ်းမံသည်။
စွပ်စွဲသောကြောင့်၎င်း၏မိဘပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ် (ကဂရမ်အခြေခံပေါ်မှာ) ခိုင်မာတဲ့အဖြစ် 20-60 ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ခုတ္ထုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ phenylpiracetam အောက်ပါဒေသများရှိ piracetam ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်:
သည်အခြားအမည်များ: Fonturacetam, (RS) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide, phenotropil, carphedone
ကြောင့်ဘယ်သူ၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ stimulatory ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာ phenethylamine, အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတူညီဖို့က adrenaline နှင့် dopamine receptors မှချိတ်ဆက်မှုရှိကြောင်းယူဆနိုင်ပါသည်။
Phenotropil ၏ developer များအလိုအရဦးနှောက်အတွက်အောက်ပါအဆင့်ဆင့်တိုးပွါး: သွေးစီးဆင်းမှု, epinephrine, dopamine နှင့် serotonin ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ဂါဘမြို့သားနှင့်မသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ် binding ဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်။
(ကြွက်နှင့်အတူ) တစ်ဦးအမေရိကန်သုတေသနစာတမ်းအတွက် acetylcholine နှင့် NMDA receptors နှင့် serotonin နဲ့ dopamine receptors တစ်ဦးလျှော့အာရုံစူးစိုက်မှု၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်၏လက္ခဏာများရှိပါသည်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး & ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
အားလုံး Racetams လိုပဲ, ကကောင်းမွန်စွာလူ့ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်သည်းခံတတ်၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်နိမ့်သည် - နေသမျှကာလပတ်လုံးကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပမာဏသာရှိကိုလောင်နေသည်အဖြစ် (စားသုံးမှု & စာနာထောက်ထားရေးကြည့်ပါ) ။
Phenylpiracetam ကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းယူမရသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အသည်းသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်ကမပါဘဲလုပ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။
စိုးရိမ်ပူပန်၏ခံစားချက်များကို, ယားယံခြင်း, သို့မဟုတ်ရင်တုန်: စိတ်ကြွဆေး၏ပုံမှန်အတိုင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းကဲ့သို့သော, ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ခေါင်းကိုက်သတင်းပို့ပါ။ တစ်ဦး acetylcholine ချို့တဲ့အောငျနိုငျဦးနှောက်ထဲမှာပါလျှင်ဤရွေ့ကား, ရှိသမျှ Racetamen အတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဖွဆေးအဖြစ်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ stack တစ်ခု choline အရင်းအမြစ်ထည့်ပါ။
ကြွက်များတွင် 880mg / ကီလိုဂရမ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တစ်ဦးသေစေလောက်ထိုးအကြံပြုထားတဲ့ဆေးထိုးရာမှတစ်ဦးမြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုအနားသတ်ညွှန်း, ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်သူအဆိုအရမျှမှတ်တမ်းတင် tetralogic, mutagenic သို့မဟုတ်ကင်ဆာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Sunifiram ယင်း၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ Racetamen မှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ nootropic ဂုဏ်သတ္တိများ၏အစုရှယ်ယာအများအပြား။ ဒါဟာအတိအကျသောက်သုံးသောမှသတိထားရမှာ, piracetam (ဂရမ်-based) ကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့ 1000 ကြိမ်အဖြစ်ကြော်ငြာသည်နှင့်အခြားနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားမဖြစ်သင့် nootropics အတူတူ။
ဒါဟာ Unifiram တစ်ဦးစျေးပေါကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အဓိကအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။
ဒါဟာမှတ်ဉာဏ်, သင်ယူမှု, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်, အာရုံစူးစိုက်မှု, လှုံ့ဆျောမှု, အမြော်အမြင်နှင့်စိတ်ဓါတ်များမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဆေးတခါသောက်: ရှိတယ်မရှိဘူးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောလေ့လာမှုများဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်5ဆုံးဖြတ်ခဲ့ - တစ်နေ့လျှင် 10mg အရှိဆုံးလူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Sunifiram သည်အခြား nootropics နှင့်အတူ overdosed သို့မဟုတ်ရောစပ်မရသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာတစ်ဦး AMPA agonist အဖြစ်ပြုမူခြင်းနှင့်ဦးနှောက် cortex အတွက် glutamine ၏ထုတ်လုပ်မှု, ထိုမှတပါးလွှတ်ပေး acetylcholine တိုးပွားစေပါသည်။
အဘယ်သူမျှမဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသုတေသနမှတဆင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်, Sunifiram ထိုကဲ့သို့သောအလွန်အကျွံသုံးစွဲ၏အမှု၌ထိနမိဒ္ဓ, အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအဖြစ်ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
Bromantane အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်တဲ့လှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သုံးတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကပိုမိုသည်းခံစိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှအထိခိုက်မခံမတည်မနေသငျ့ဘူး။
ဒါဟာသိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုမထိခိုက်စေဘဲအိပ်စက်ခြင်း-သွေးဆောင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှိမ်နင်းရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သာမန်ခွအေနမြေား (အိပ်စက်ခြင်း၏ဆင်းရဲခြင်းမရှိသည့်အခါ) အောက်မှာရွှင်လန်းနှင့်အလုပ်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
modafinil ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်။ ဒါဟာဦးနှောက်ထဲမှာအမျိုးမျိုးသော neurotransmitters များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ယုံကြည်ကြသည်။
Bromantane ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အဖြစ်အချို့သောသိမြင်ဒေသများ, ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
Bromantane သူတို့၏ပြိုကွဲအရှိန်အားဖြင့်အချို့သောဆေးဝါးများများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်: itraconazole, ciclosporin, temazepam, amitriptyline, erythromycin ။
ထိုကဲ့သို့သော Aspirin ကိုသို့မဟုတ် warfarin အဖြစ်အသွေးတော်-thin အေးဂျင့်ကိုယူနေတယ်ဆိုရင်, သင်မှန်မှန်သင့်သွေးခဲစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Armodafinil, ဖြူအစိုင်အခဲဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတုနာမကိုအမှီ2- [(R) - (diphenylmethyl) sulfinyl] ကို C 15 H ကို 15 NO2S ကို 273.35000 C. မှ 156 တစ်ဦးမော်လီကျူးအလေးချိန်နှင့် 158 တစ်အရည်ပျော်မှတ်ရှိခြင်း၏မော်လီကျူးပုံသေနည်းရှိခြင်း acetamide Amofenib တစ်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်တစ်နေ့တာအတွင်း narcolepsy, စိတ်ကျရောဂါ, idiopathic အိပ်သို့မဟုတ် narcolepsy ၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။
အဘယ်သူမျှမ CAS .: 112111-43-0
သိပ်သည်းဆ: 1.283g / စင်တီမီတာ 3
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအချက်: 559.1mmHg မှာ 760oC
Flash ကိုအမှတ်: 292oC
အခိုးအငွေ့ဖိအား: 1.56C မှာ 12E-25mmHg
ဒီထုတ်ကုန်ကုထုံးဆေးများမှာဦးနှောက်အာရုံကြောများ၏လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများများ၏အာရုံကြော function ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်ခံစားချက်, ခံစားချက်, အတှေးအများနှင့်စိတ်ခံစားမှုတိုးတက်အောင်အခြားပုံမှန်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်စိတ်ကြွဆေးဆင်တူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားထုတ်လုပ်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်များ၏အလယ်ပိုင်း excitatory အကျိုးသက်ရောက်မှု gamma-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) ၏ထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆဲလ်များ၏ detoxification နှင့်စွမ်းအင်ဇီဝြဖစ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအားပေးအားမြှောက်ထားတဲ့ glutamine synthetase ၏ထို့အပြင်မှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီထုတ်ကုန်လျင်မြန်စွာသည်နှင့်လုံးဝပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်စုပ်ယူ။ အဆိုပါပလာစမာအာရုံစူးစိုက်မှုနာရီအတွင်း2အကြောင်း4မှာအထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိ။ အစားအစာထုတ်ကုန်များ၏ bioavailability မထိခိုက်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါဟာမူးယစ်ဆေးများ၏စုပ်ယူမှုကိုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် 1 ဇအားဖြင့်အထွတ်အထိပ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြန့်ဝေသည်သိသာဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်, 0.9L / ကီလိုဂရမ်နှင့် ပတ်သက်. စုစုပေါင်းခန္ဓာကိုယ်အရည် 0.6L / ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အဆိုပါပလာစမာပရိုတိန်း binding နှုန်းကိုအဓိကအားဖြင့်ပလာစမာ albumin နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ 60% ဖြစ်ပါသည်။ 200 ၏အုပ်ချုပ်မှုတစ်နေ့လျှင် MG ပြီးနောက်, ပလာစမာမူးယစ်ဆေးအာရုံစူးစိုက်မှုပုံမှန်ပြည်နယ်ရောက်ရှိနှင့် warfarin, diazepam နှင့် propranolol ၏စညျးပလာစမာပရိုတိန်းမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ Modafinil အသည်းထဲမှာ CYP450A3 ၏ cytochrome P4 စနစ်ဖြင့် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။ ထို့ကြောင့်, CYP3A4 သွေးဆောင်သို့မဟုတ် inhibitor များ၏ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းကိုဒီထုတ်ကုန်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏အသွေးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကြာချိန်ကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထုတ်ကုန်အဘယ်သူမျှမကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်သောနှစ်ခုအဓိက metabolites, modafinic အက်ဆစ်နှင့် modafinilone, ထုတ်လုပ်ရန်အသည်းအားဖြင့် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။ Metabolites 90% များအတွက်အကောင့်များနှင့် unmetabolized မိဘမူးယစ်ဆေးဝါးများ 10% ထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကျောက်ကပ်အားဖြင့်ပြန်ထွက်သွားသည်ကို၎င်း, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖျက်သိမ်းရေးဝက်ဘဝ 10-15 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးငယ်များ၏မူးယစ်ဆေးကင်းရှင်းမှုနှုန်းလုလင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း, သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ရှင်းလင်းရေးနှုန်းသည်လူငယ်များထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်။
အရည်ပျော်အမှတ်: 164-166 ကို C
Modafinil ပုံမှန်လူဦးရေရဲ့ဗဟိုစိတ်လှုပ်ရှားတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ပါးစပ် modafinil ပြီးနောက် 22nd နာရီမှပထမဦးဆုံးအခြိနျ မှစ. EEG စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက်ရွှင်လန်းထင်ဟပ်သည့်α / θတန်ဖိုးကိုမြင့်သောအညွှန်ပြနေပြီး, နီးပါးလုံးဝနှိမ်နင်းသည့်ရံဖန်ရံခါ Micro-အိပ်ပျော်ခြင်းလှိုင်း။ အိပ်စက်ခြင်းဆုံးရှုံးလူတွေအဘို့, အိပ်ရေးပျက်လူတွေရဲ့ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်နှိမ့်ချလုပ်ကိုင်ဖို့စွမ်းရည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
modafinil ယူပြီးထိထိရောက်ရောက်ဒီအခွအေနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာရေးအိပ်ရေးပျက်တဲ့ညဥ့်ပြီးနောက်, modafinil ၏ 200 မီလီဂရမ်ယူပြီး, စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ psychomotor စွမ်းရည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြောင်းပြသကြပြီ အဆိုပါ 60 နာရီအိပ်ရေးပျက်နေစဉ်အတွင်း, တိုင်း 8 နာရီ Dalfene 200 မီလီဂရမ်နေဆဲသူတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာရွှင်လန်းခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုင်အောင်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ပြည်နယ်အတွက်အိပ်ရေးပျက်၏ဗဟိုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တတ်နိုင်သည်။ Modafinil လည်းအချို့သောအာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာ modafinil ထိရောက်စွာ 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine များ၏ထုတ်လုပ်မှုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနိုင်သောဦးနှောက်ဒဏ်ရာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ neurotoxic အကျိုးသက်ရောက်မှုလက္ခဏာများသိသိသာသာစိတ်သက်သာရာစေသည်။ modafinil များ၏အာရုံကြောဆိုးကျိုးများလည်းအသီးသီး, အ striatum စက်မှုဒဏ်ရာမော်ဒယ်နှင့် ischemic ဒဏ်ရာမော်ဒယ်အတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ modafinil ၏ဗဟို excitatory လုပ်ဆောင်ချက်ကို inhibitory neurotransmitter, ဂါဘမြို့သားတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့် serotonin (5-HT) နှင့် norepinephrine နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု modafinil ၏ဗဟို excitatory အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ဂါဘမြို့သားများထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချနှင့်အာရုံကြောဆဲလ်များ၏ detoxification နှင့်စွမ်းအင်ဇီဝြဖစ်လှုပ်ရှားမှုများမြှင့်တင်ရန်, glutamine synthetase ၏တိုးမှတဆင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီထုတ်ကုန်လျင်မြန်စွာသည်နှင့်လုံးဝပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်စုပ်ယူ။ အဆိုပါပလာစမာအာရုံစူးစိုက်မှုနာရီအတွင်း2အကြောင်း4မှာအထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိ။ အစားအစာထုတ်ကုန်များ၏ bioavailability မထိခိုက်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါဟာမူးယစ်ဆေးများ၏စုပ်ယူမှုကိုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် 1 ဇအားဖြင့်အထွတ်အထိပ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြန့်ဝေသည်သိသာဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်, 0.9L / ကီလိုဂရမ်နှင့် ပတ်သက်. စုစုပေါင်းခန္ဓာကိုယ်အရည် O.6L / ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အဆိုပါပလာစမာပရိုတိန်း binding နှုန်းကိုအဓိကအားဖြင့်ပလာစမာ albumin နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ 60% ဖြစ်ပါသည်။ 200 ၏အုပ်ချုပ်မှုတစ်နေ့လျှင် MG ပြီးနောက်, ပလာစမာမူးယစ်ဆေးအာရုံစူးစိုက်မှုပုံမှန်ပြည်နယ်ရောက်ရှိနှင့် warfarin, diazepam နှင့် propranolol ၏စညျးပလာစမာပရိုတိန်းမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
Modafinil အသည်းထဲမှာ CYP450A3 ၏ cytochrome P4 စနစ်ဖြင့် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။ ထို့ကြောင့်, CYP3A4 သွေးဆောင်သို့မဟုတ် inhibitor များ၏ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းကိုဒီထုတ်ကုန်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏အသွေးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကြာချိန်ကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထုတ်ကုန်အဘယ်သူမျှမကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်သောနှစ်ခုအဓိက metabolites, modafinic အက်ဆစ်နှင့် modafinilone, ထုတ်လုပ်ရန်အသည်းအားဖြင့် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။ Metabolites 90% များအတွက်အကောင့်များနှင့် unmetabolized မိဘမူးယစ်ဆေးဝါးများ 10% ထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကျောက်ကပ်အားဖြင့်ပြန်ထွက်သွားသည်ကို၎င်း, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖျက်သိမ်းရေးဝက်ဘဝ 10-15 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးငယ်များ၏မူးယစ်ဆေးကင်းရှင်းမှုနှုန်းလုလင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း, သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ရှင်းလင်းရေးနှုန်းသည်လူငယ်များထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်။
ဆေးပညာ interaction က
4 ။ ဒီထုတ်ကုန်တီးရွိုက် contraceptives ၏ curative အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အခြားအတားဆေးအတိုင်းအတာမူးယစ်ဆေးဝါးရပ်တန့်ပြီးနောက်ဒီထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းစဉ်နှင့်တစ်လအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။
Noopept တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း phenylacetylproline, cycloprolylglycine နှင့် phenylacetic အက်ဆစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူ metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်သည်။ noopept ၏ဝက်ဘဝ 0.38 နာရီအထိရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
NO CAS ။ 157115-85-0
မူးယစ်ဆေးဝါး၏ nootropic လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားဟာ endogenous antiamnestic သိသိ dipeptide မှဖွဲ့စည်းပုံမှာအလားတူ cycloprolylglycine ဖွဲ့စည်းရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံသည်။
အဆိုပါပြင်ဆင်မှု Noopept, အ transcallosal တုံ့ပြန်မှုလွှဲခွင်ပေါ်ပေါက်ဦးနှောက် hemisphere အကြား cortical အဆောက်အဦများ၏အဆင့်မှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဆက်သွယ်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
ကြောင့် craniocerebral စိတ်ဒဏ်ရာ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဒဏ်ရာအဖြစ်ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ischemia လျှော့ချမူးယစ်ဆေး Hoenopt, သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများပြန်လည်နာလန်ထူ, အသုံးပြုတဲ့အခါ, မှတ်ချက်ပြုသည်။
ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အော်ဂဲနစ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာများတွင်မူးယစ်ဆေး Hoenopt ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကုသမှု၏ 5th-7th နေ့၌ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ယင်းကုထုံး၏အစအဦးမှာ anxiolytic နှင့်မူးယစ်ဆေးအချို့လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှု Hoenopt လူနာအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းတိုးတက်မှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းအပါအဝင်ပိုမိုသိသာသည်။ 2-3 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်ကုထုံးရဲ့ start ပြီးနောက်, သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုလည်းမရှိ။
Noopept ကိုလည်း vegetomonal အကျိုးသက်ရောက်မှု (ခေါင်းကိုက်, tachycardia နှင့် orthostatic မမှန်လျော့ကျစေပါတယ်) ရှိပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့အ Hoenopt, teratogenic immunotoxic နှင့် mutagenic အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမပေးပါ။ လူနာအတွက်ကုထုံး၏ချုပ်ရာဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါမရှိဖှံ့ဖွိုးတိုးတရှိပြီးနောက် Noopept, စွဲလမ်းစေပါဘူး။
ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် noopept ကောင်းစွာအစာခြေလမ်းကြောင်းအတွင်းစုပ်ယူသည်။ noopept ၏ Bioavailability 99.7% အထိရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစေးအတွက်၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုပလာစမာပြင်းအားထက်ကျော်လွန်နေစဉ်တက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်း, သွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးစိမ့်ဝင်သွားတယ်။
peak ပလာစမာပြင်းအားပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 15 မိနစ်အတွင်းအောင်မြင်နေကြသည်။
Noopept သိမြင်မှုချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကမ်ဘာဦးကစိတ်ခံစားမှု lability ခံစားနေရပြီးကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အမျိုးအစား (အရွယ်ရောက်သူနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာ) ၏လူနာကုသရန်အသုံးပြုသည်။ အထူးသဖြင့်, မူးယစ်ဆေး Noopept ဟာစိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်မေ့မြောပြီးနောက်သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါတယ်အဖြစ် (အမျိုးမျိုးသော etiologies ၏ encephalopathy အပါအဝင်) ဦးနှောက်သွေးလည်ပတ်မှုမလုံလောက်အတူလူနာများနှင့် asthenic မမှန်။
Noopept တိုးတက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့လူနာတွေအတွက်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ (မှတ်ဉာဏ်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သင်ယူမှုစွမ်းရည်) ကိုတိုးမြှင့်ခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာများ Mode ကို
Noopept ပါးစပ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ တက်ဘလက်သောက်သုံးရေသို့မဟုတ် unsweetened လက်ဖက်ရည်၏ပဒေသာနှင့်အတူအစာစားပြီးနောက်ယူရပါမည်။ ကုထုံး၏အစအဦးမှာတစ်ဦးစိုးမိုးရေးအဖြစ်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် noopept ၏ 10 မီလီဂရမ်ခန့်အပ်။ ယင်းကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုအလုံအလောက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါနှင့်မူးယစ်ဆေး Hoenopt ကောင်းစွာလူနာအားဖြင့်သည်းခံသောဖြစ်ရပ်အတွက်, ဆေးထိုး 10 မှတိုးပွါးတနေ့သုံးကြိမ် MG ။
J147 CAS 1146963-51-0 အဆိုပါ Racetame များ၏မိသားစုပိုင်; ဤအုပ်စုထဲမှာတ္ထုများဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာဆင်တူပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဓာတုဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ကွာခြား။
အံအစုလိုက်အပြုံလိုက် 350.34 ဂရမ်· mol-1
အားလုံး Racetams (ကွဲပြားဒီဂရီ) မှာသွန်းသောအသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်, Pramiracetam လူသိများတဲ့ Racetame ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအဆီနိုင်မှုရှိပါတယ်, နှင့်လျှင်မြန်စွာခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူ - ဖြစ်ကောင်းကြောင့်နှစ်ဆ lipid အလွှာဖြတ်သန်းရန်၎င်း၏စွမ်းရည်၏။
တချို့ကသုတေသီများက "သူ့ရဲ့လူသိများတဲ့အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းအဖြစ်ကဲ့သို့ခိုင်မာသော 5-10x ကြောင်းယူဆ Piracetam "။
ဒါဟာအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ကသူ့စွမ်းရည်မှတဆင့်မိမိညီအစ်ကိုတို့ထံမှအဓိကအားဖြင့်ကွဲပြားနေသည်။ ထို့ပြင်ထိုသို့သောတိုးမြှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကဲ့သို့သောအခြားပုံမှန် Racetam ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်။
ဒါဟာ phenethylamine နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတူညီသည့် stimulatory အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ ဤတွင်အဆိုပါသုတေသနအများစုသာလေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းမှခံစားခဲ့ရသူတွေကိုအပေါ်ပြုလေ၏။
CAS အရေအတွက် 77472-70-9
မော်လီကျူးပုံသေနည်းကို C 12 H ကို 14 N ကို2အို 2
အံအစုလိုက်အပြုံလိုက် 218.26 ဂရမ်· mol -1
200mg ၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးပေးထား Encephalopathy လူနာစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်, နာကျင်မှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအတွက်တိုးတက်မှုများကိုမြင်တော်မူ၏။
တခြားလေ့လာမှုလည်း memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို span အတွက်တိုးတက်မှုများမှတ်ချက်ချသည်။
ဖြစ်နိုင် anticonvulsant နှင့်သိမြင်မှုဂုဏ်သတ္တိများမော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံ၏ piracetam တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှတွေကပေါ်ကနေဖြစ်ကြသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များ piracetam ၏လုပ်ဆောင်ချက်အတိအကျယန္တရားနှင့် ပတ်သက်. မသေချာမရေရာများမှာသော်လည်း, သူတို့သည်တိုးလာဆဲလ်လျော့ပြေနဲ့အချိုမှုစည်းမျဉ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတာဝန်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာတချို့ neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်: sunifiram ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအောက်တွင်ခဲ့တိရိစ္ဆာန်များကိုအနီးကပ်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်သောထားတဲ့ဦးနှောက်အတွက်အမျိုးမျိုးသောမော်လီကျူး၏ phosphorylation တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
အံအစုလိုက်အပြုံလိုက် 246.304 g / mol
အဆိုပါစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအုပ်စုနှစ်စုခွဲခဲ့ကြသည်: တစ်ခုမှာတစ်ဝက် Sunifiram မှဦးဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်, အခြားဘာမျှတယ်။ ယင်းနောက်အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များ၏မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုတစ်ဦးက Y-ဝင်္နှင့်စမ်းသပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် object တစ်ခုအသိအမှတ်ပြုမှု၏အကူအညီဖြင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
အောက်ပါနိဂုံးချုပ်ရယူခဲ့ပါသည်: sunifiram ပေးထားတိရစ္ဆာန်များပိုကောင်းရလဒ်များကိုရှိခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါအတွက် Sunifirams အကျိုးသက်ရောက်မှု: အဘယ်သူမျှမခြားနားချက်နှစ်ခုအုပ်စုများအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအလုံအလောက်, အင်တာနက်ပေါ်မှာသက်သေခံချက်အများအပြားလက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြ။
1 ။ Sunifiram ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အခြား Ampakines ၏ဆင်တူသည်။ ဒါဟာ AMPA receptors ကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မောက်လေ့လာမှုများတွင်တိရစ္ဆာန်ပထမဦးဆုံး AMPA ရန် NBQX ပေးထားခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်မှ Sunifiram အစာကျွေးပြီးနောက်ကြောင့် NBQX ၏သက်ရောက်မှု reverse တို့အားထင်ရှားလေ၏။ တစ်ဦး AMPA agonist ကြောင့်နိုင်စွမ်း, အာရုံစူးစိုက်မှုကို span နှင့်ရွှင်လန်းသင်ယူခြင်း, မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
2 ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် sunifiram အဆိုပါနှောက် cortex အတွက် acetylcholine လွှတ်ပေးရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ တစ်ဦး cholinergic ဒြပ်ပေါင်းများကြောင့်ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်, ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်မော်တာကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်ပိုမိုလေ့လာမှုများထုတ်ဝေထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
0.001 ၏ (1 / ကီလိုဂရမ်အသေးဆုံးထိရောက်သောထိုး mg), အဘယ်သူမျှမဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုထိုးသွင်းထိုး (ကြွက်) နဲ့တှေ့မွငျရခဲ့ကြသည် sunifiram ၏ထိရောက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ / ကီလိုဂရမ် MG ။
ကံမကောင်းစွာပဲအခြားအသုံးပြုသူများ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးမျှလက်တွေ့လေ့လာမှုများ, ရှိပါတယ်။ အထွေထွေ Sunifiram လုံခြုံစွာခွဲခြားတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောက်သုံးသောထက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက် overdosed ရပါမည်နှင့်ပေါင်းစပ်တခြားတွေနဲ့အသုံးမပြု nootropics.
ဒါဟာပိုပြီး3ကြိမ်အပတ်ကထက် Bromantane ယူဖို့မအကြံပြုသည်။ ဒါ့အပြင်ရေရှည်စားသုံးမှုပေါ်တွင်သင်အစားမပါဘဲလုပျသငျ့သညျ။
အဘယ်အရာကို nootropics မဟုတ်:
•သင်သည်ရုပ်ရှင် "အဆမဲ့" ၌ရှိသကဲ့သို့, နေ့ချင်းညချင်းတစ်စူပါဦးနှောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်သည်သင်၏အားသာချက်မှသုံးနိုငျတဲ့ဖြည့်စွက်အဖြစ်ကစဉ်းစားပါ။
• Nootropics ကျန်းမာစား, ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လုံလောက်သောအိပ်စက်မှုအဘို့အဘယ်သူမျှမအစားထိုးဖြစ်ကြသည်။
ဘယ်လို nootropic မူးယစ်ဆေးအလုပ်လုပ်ပါသလဲ
အောက်ပါအမှုအရာပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့် Nootropics အလုပ်:
ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်, ဦးနှောက်အောက်ဆီဂျင်, ဦးနှောက်ဆဲလ်များရရှိနိုင်မှု, ဆဲလ်ကြီးထွား။
ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ် မူတည်. တိုးတက်မှုအောက်ပါဒေသများရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်:
• Spatial မှတ်ဉာဏ်
•နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြစ် / အဟော
ပြဿနာများ (အတွေးစီးဆင်းမှု) ဖြေရှင်းဖို့•နိုင်ခြင်း
အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအပြင်မျှော်မှန်းထားခံရဖို့အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေး, စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်, အဆက်အသွယ်စိုးရိမ်စိတ်, ရှက်ကြောက်စိတ်, စင်ကြောက်စိတ်, ကွောနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်အပြုသဘောဆောင်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူနိုင်ပါတယ်။
Are Nootropics စွဲလမ်းစေ?
အကြမ်းအားဖြင့်စကားပြော: အဘယ်သူမျှမ။ ထိုကဲ့သို့သောဖိန်း, sulbutiamine နှင့် modafinil အဖြစ်စိတ်ကြွဆေးအဘို့, အခြားဇာတ်လမ်းပါပဲ။
ဤသည်ကကုန်ပစ္စည်း, နှင့်အသုံးပြုသူပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, ယေဘူယျမရနိုင်ပါ။ အောက်ပါအချက်များကိုပျမ်းမျှဖြစ်ကြပြီးကွဲပြားလိမ့်မည်။
စိတ်ကြွဆေး / နိုး-ထုတ်လုပ်သူ (စသည်တို့ကိုဖိန်း, modafinil,) - 30 မိနစ်အတွင်းနာရီပေါင်းများစွာရန်။
3 ရက်သတ္တပတ်မှအများအားဖြင့်4အတွင်း - အာဟာရ Nootropics (Creatine သည်အိုမီဂါ-8) အခြေခံ. ။
Piracetam -2ရက်သတ္တပတ် -4အတွင်းမှာပဲ။ တစ်ဦးကစမ်းသပ်ပြေးသည်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ဖျော်ဖြေရပါမည်။
22637 Views စာ
ကမ်ဘာပျေါတှငျ 8 သြဇာအရှိဆုံးလိင်မူးယစ်ဆေး Powder	ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံး-ရောင်းအားအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Powder ဖြည့်စွက်